Nagu saabsan - Hangzhou LIAO Technology Co., Ltd.
Waxaa la aasaasay sanadkii 2009, Hangzhou LIAO Technology Co., Ltd. waa soo saare xirfad iyo hogaamin ku takhasusay LiFePO4baytariyada. Wax soo saarkayaga waxaa loo dhoofiyay in kabadan 20 wadan oo aduunka oo dhan ah.
Waxaan horey u dhisnay nidaam adag oo hufan oo QC ah. Dhammaan alaabooyinkeenna waxaa si adag loogu soo saaraa nidaamka maaraynta tayada ee ISO 9001. Dhanka kale, waan ka gudubnay oo had iyo jeer waannu ilaalinnaa u hoggaansanaanta nidaamka maareynta deegaanka ee ISO 14001 iyo sidoo kale nidaamka shaqada ee caafimaadka iyo nabadgelyada shaqada ISO 18001.
Adeeg aad u fiican iyo tayo la isku halleyn karo ayaa naga caawineysa inaan ku guuleysano sumcad adduunka oo dhan ah, tusaale ahaan:
Jarmalka, Faransiiska, Nederland, Isbaanish, Boqortooyada Ingiriiska…
Kuuriya, Jabbaan, Hindiya…
Koonfur Afrika, Nigeria…
Iyo wadamo kale
Feejignaan + Maareyn Xirfad leh & Kooxda Farsamo ， awood u leh inay kajawaabto baahiyaha macaamiil kasta waqtigooda.
Tiknoolajiyadda Muhiimka ah ， Nidaamka R & D Gebi ahaanba ， awood u leh inuu xal u helo baahida macaamiisha.
Maareynta Wax soosaarka Xirfadeed & shaqaale xirfad leh, kontorool tayo oo dhameystiran oo dammaanad leh. OEM & ODM waa la soo dhoweeyay.
Kooxda iibinta khibrad sare iyo xirfad leh. Waxay leeyihiin daacadnimo, u hoggaansanaan sharciga, wada shaqeyn, masuuliyad, iyo ruux hormood ah. Waxay leeyihiin karti suuq geyn, awoodaha gorgortanka ganacsiga, awooda farsamaynta waraaqaha, awoodaha howlaha ganacsiga, awoodaha maareynta oo dhameystiran, xirfadaha dadka, iyo awoodaha waxbarasho ee joogtada ah. Waxay yaqaanaan xirfadaha Ingiriisiga, aqoonta wax soo saarka, aqoonta suuqgeynta caalamiga ah, dhaqamada ganacsiga caalamiga ah, sharciyada iyo siyaasadaha ganacsiga ajaanibta, iyo aadaabta ganacsiga ganacsiga shisheeye.
LIAO R & D iyo soo saarida baytariyada birta ah ee fosfateerka, oo leh badbaado, ilaalinta deegaanka, nolol dheer, awood balaaran, cabir yar, miisaan fudud, waxqabad heer sare ah, iyo iyadoo loo eegayo baahiyaha dhabta ah ee codsiyada, oo loogu talagalay noocyo kala duwan oo deegaan ahaan ah baytariyada saaxiibtinimo, adeegyo daryeel daacad ah macaamiisha gudaha iyo kuwa caalamiga ah.
Ku soo dhawow inaad nala shaqeyso OEM iyo ODM
Waxaa si weyn loo qadarin doonaa haddii aad nala soo xiriirto wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan shirkadeena iyo alaabteena.